လက်မှုပညာဖြင့် အိမ်အလှဆင်ရန် ချမ်း | လက်မှုပညာ On
ဂျဲနီရေတွင်း | 15/11/2021 10:00 | ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း, အိမ်တွင်းလက်မှုပညာ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် များစွာတွေ့မြင်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ချမ်းအေးချိန်ရောက်တာနဲ့ အိမ်အလှဆင်ဖို့ လက်မှုပညာ. ဤရာသီတွင် သင်သည် အလှဆင်မီးများ၊ ထွားကြိုင်းသောအထည်များ၊ ကူရှင်များစသည်ဖြင့် ... အတိုချုပ်ပြောရလျှင် နွေးထွေးပြီး အိမ်သုံးလေထုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အရာများအားလုံးကို ထားလိုပါသည်။
1 အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း နံပါတ် 1- မီးရောင်နှင့် pompoms ပါသော အလှဆင်ပန်းကုံး။
2 အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း နံပါတ် 2- ကြိုးတန်း မီးခွက်။
3 အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းနံပါတ် 3- ဖန်ပုလင်းမီးခွက်
4 အလှဆင်ခြင်းလက်ရာ နံပါတ် 4- ယက်လုပ် ကော်ဇော
အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း နံပါတ် 1- မီးရောင်နှင့် pompoms ပါသော အလှဆင်ပန်းကုံး။
ပျော့ပျောင်းသောအလင်းရောင်နှင့် နွေးထွေးသောအထည်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အလယ်ဗဟိုသည် အအေး၏ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ အလှဆင်ရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထမင်းစားခန်းစားပွဲအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၏အဝင်ပေါက်တွင်လည်း လှပနေမည်ဖြစ်သည်။
ဒီလက်ရာရဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပြုလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Pompom ပန်းကုံး
အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း နံပါတ် 2- ကြိုးတန်း မီးခွက်။
ဤမီးလုံးသည် နေ့စဥ်နေဝင်ချိန်တွင် ပျော့ပျောင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသောအလင်းရောင်ကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ စောင်နဲ့ ပျော့ပျောင်းတဲ့ မီးရောင်တွေနဲ့ ဆိုဖာပေါ်ထိုင်တာထက် ပိုအဆင်ပြေတာ မရှိပါဘူး။
ဒီလက်ရာရဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပြုလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူကြိုးအလင်းအိမ်လုပ်နည်း
အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းနံပါတ် 3- ဖန်ပုလင်းမီးခွက်
ဤနေရာတွင် ဖန်ပုလင်းများဖြင့် မီးခွက်များပြုလုပ်ရန် မတူညီသောနည်းလမ်းနှစ်ခုကို သင်တွေ့လိမ့်မည်၊ အလွန်လွယ်ကူသည့်အပြင် မည်သည့်စင်ကိုမဆို အလှဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
ဒီလက်ရာရဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပြုလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖန်ပုလင်းနှင့် ဦး ဆောင်အလင်းအိမ်နှင့်အတူအလှဆင်မီးခွက်နှစ်ခုလုပ်ပါ
အလှဆင်ခြင်းလက်ရာ နံပါတ် 4- ယက်လုပ် ကော်ဇော
ချမ်းအေးတဲ့ရာသီဥတုရောက်တဲ့အခါ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့တဲ့ အထည်တွေက ဂန္တဝင်ပါပဲ။
ဒီလက်ရာရဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပြုလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကရိုးရှင်းတဲ့လမ်းအတွက်ယက်ရေချိုးဖျာလုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » လက်မှုပညာဖြင့် အိမ်အလှဆင်ရန် ချမ်းအေးလာ၏။
ရိုမန်မျက်မမြင် ပြတင်းပေါက်များအတွက် အထုပ်လိုက်ကာကာများ